N'ikpeazụ eriri oge! – Nye t.o.m. 31/3! | Holmbygden.se
Ihe na 14 March, 2017 site Holmbygden.se
Ugbu a ọ bụ akpatre oge jikọọ Holm district na eriri brọdband. Ụbọchị ndị a Holm Fibers òtù natara na-enye na mail igbe ruo mgbe 31 March pụrụ isonyere maka ego nke 18 400 kr (1500 Kr sii okwu. ekele 19 900 kr). Ọbụna ndị na-adịghị chọrọ ahu nagide ọrụ taa, jikọọ ụlọ ga-eme n'ọdịnihu mkpa!
Ọrụ ike kemgbe October 2013
Ọ bụ mgbe banyere 3,5 Afọ nke ịrụsi ọrụ ike site Holm Fibers ịbanye na òtù signings, nzukọ, ngwa M.M.. dị ka ọ bụ ugbu a doro anya na e nwere ServaNet ga sere net na Holm. ServaNet bụkwa ụlọ ọrụ nke ga-eme na interurban eriri-optic netwọk si Sundsvall, nke pụtara na ndị ọzọ ndị mmadụ ga-enwe ike isonyere kemgbe n'èzí Holm Fibers catchment.
Gụnyere-egwu ala n'ụlọ na-enye
Na mbụ nkebi, e nwere kemgbe okwu nke compound onwe ya ga-eme ndokwa maka olili nke USB na Holm na gị onwe gị pụrụ iguzo na ya na-egwu ala ikpeazụ bit rigorue ulo mgbidi. The àjà taa, Otú ọ dị, na-agụnye ma na-egwu ala ụzọ niile, na-eme ka oghere dị ná mgbidi. Anyị amaghị taa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ma ọ bụ mkpa nke ọrụ nke netwọk, ị nwekwara ike na-eche na na ndenye aha. N'ụzọ dị otú a, ụlọ ka jikọọ na netwọk, nke n'onwe ya na-ewelite onwunwe ụkpụrụ budata karịa ịkpụ-eri. The oge bụ itinye shọvel na ala na ọnwa atọ, na June.
The mkpakọrịta na-aga n'ihu nke N'ezie nyochaa usoro nke eriri ịbịaru taa, ọ bụ ezie na ServaNet adia ngwa na ọrụ megide County Board. Otú ọ dị, ọ bụ ugbu a ruo onye ọ bụla na-ahọrọ ma ọ ga na eriri ma ọ bụ na. E nwere otú nweghị nkịtị mkpakọrịta mkpebi maka nke a. Olee ọrụ Holm Fibers mgbe ahụ ga nwere ugbu a gaa n'ihu ga-ọkọnọ na-atụle ná nzukọ kwa afọ ke mbubreyo mmiri na n'ikpeazụ kpebiri site òtù. Gụkwuo ebe a banyere Holm eriri na n'isiokwu.
Info igbe maka ServaNet enye
Maka ozi ọzọ banyere nso nke ọrụ, ngụkọta oge atụ, ọnọdụ M.M.. nwere ike dị na nzipu ozi.
Ọ bụghị nanị na eriri
Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na ime obodo mmepe bụ mmụba nke brọdband na Holm bụghị naanị banyere ihe onwe ya – a ngwa ngwa Internet, TV ọrụ na IP telephony. Ịzụlite district ikpokọta ike isi mmadụ maka ọdịnihu. Na mkpokọta mkpa na-na njem Holm Fibers Board allra första facebookinlägg citeras; “Anyị na-ewetara ndị na-arụ ọrụ na-aga n'ihu iji hụ na anyị n'ala nna ga-enwe ohere nke dị oké mkpa brọdband netwọk anyị n'ala nna na-anọgide na-adị ndụ na ịzụlite na-eme n'ọdịnihu. Ka anyị na-enye ụmụ anyị na ụmụ ụmụ ya na ndị ọzọ ohere nke ịdị ndụ na anyị mara mma n'ala nna.”